फेरि फुट्यो एमाले, को-को बने नयाँ अध्यक्ष ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
फेरि फुट्यो एमाले, को-को बने नयाँ अध्यक्ष ?
ती महँगा सामान उपभोग गर्न प्रचण्डले नदिएको भनेर ओलीले रिस गरेकोसमेत प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘ती महँगा सामान उपभोग गर्न नपाउने कसले बनायो ? मलाई लाग्या छ, नेपाली जनताले बनायो । उनलाई (ओलीलाई) लाग्या छ– माओवादीले बनायो, प्रचण्डले नै बनायो। इमान्दार मेडिया बाट